एक भेडा फ्लोरिसिस्टेरस्टलाई सहयोग गर्न: क्युनीज काट्न कहिले
प्रायः शुरुवात फूल उत्पादकहरू एक प्राकृतिक प्रश्न छन्: "कहिलेकाँही पीडाहरू काट्न, त्यसो गर्दा बिरुवा नष्ट नगर्नु र नयाँ वर्षमा अधिकतम उज्ज्वल कलहरू पाउनु हुन्छ?" त्यहाँ धेरै सरल, तर अनि अनिवार्य अवस्थाहरू छन्, जसको पूर्तिले फ्लोराको यी भ्रामक प्रतिनिधिहरूको साथ अगाडि बगाउनेछ।
बढ्दो फूलको लागि
Peonies को साइट मा जीवन को पहिलो दुई वर्ष उभरते भएका कलहरु को पूर्ण हटाउन को आवश्यकता हो। यो यो "बार्बिक" दृष्टिकोण हो जसले सम्पूर्ण संयंत्रको द्रुत विकासलाई प्रोत्साहन दिन्छ र, परिणामस्वरूप, भविष्यमा धेरै प्रशस्त फूल प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि लक्ष्य तपाईंको घर उपलब्ध गराउनु हो वा लामो स्टोरेजमा ठूला साथीहरूसँग पसल गर्नुहोस्, त्यसपछि सबै सानो कल्याण तल शीर्ष तर्फ हटाइए पछि एक सानो मटरको साइजसम्म पुग्न सकिन्छ। यसको विपरीत, यदि तपाईं उज्ज्वल, साइटमा लोशले फूल बनाउने झाडाहरू चाहनुहुन्छ भने, सबै ओभरहरू तिनीहरूका स्थानहरूमा छोडिनु पर्छ।
जब फूलहरू पछि पनी काटिन्छ
एकपटक अन्तिम पितृको कलम विलम्ब भएपछि, तपाईंले सम्पूर्ण टाउको हटाउन आवश्यक छ। फूल एक साथ कोष्ठ को एक भाग संग हटाइएको छ, पहिलो अधिकतम विकसित विकसित पत्ती को क्षेत्र मा कटौती। साधारणतया पेशेवर फ्लोरिस्टहरूले गिरावट सम्मको सानो स्ट्याम्प वा एक सम्पूर्ण स्टक छोडेर सिफारिस गर्छन्। यदि यो बिरुवाको रूख-जस्तो किसिमको खेती गरिन्छ, फूलको आकार बढाउन प्रत्येक स्टेममा कल्याणको तेस्रालाई हटाउनुहोस्। खुट्टाहरू काट्न कटिबद्ध गर्दै, यो जवान कल्याणहरू उपयोगी पोषक तत्वको मूल्यमा विकास र विकास गर्न आवश्यक छ जुन पत्तियां उत्पन्न गर्दछ। यसैले, यो कलम बिना गोली ट्रिम गर्न आवश्यक छैन - प्रत्येक झाडीमा तपाईंले सधैँ कम्तिमा 50% छुट छोड्नु पर्छ।
जब तपाईं प्याज काट्न सक्नु हुन्छ सही समय निर्धारण गर्न, अक्टोबरको दोस्रो सेप्टेम्बरमा नोभेम्बरमा, भित्री व्यवहारको पालना गर्नुहोस्। ती चाँडै पहिलो ठीक्क परेर तिनीहरू जमीनमा काटिएका हुन्छन्। यो विधि प्याजको हेबैसिस किस्मको लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि गुम्बाको समयमा जवान जवानहरू अचम्म लाग्छन् भने, त्यसपछि झापा 7-10 सेन्टिमिटरसम्म उचाईन्छ। ट्री प्रजातिहरू जीवनको 3-4 वर्षको लागि "कपाल" सुरु गर्छन्। अनुभवी किसानहरू जान्छन् कि त्यस्ता किसिमका खुट्टाहरू काट्ने - या त वसन्त वा शरद ऋतुमा। पहिलो प्रक्रियाको लागि, अक्टोबर-नोभेम्बर चयन गर्नुहोस्, जब युवा काँधहरू अहिलेसम्म विकसित भएनन्, तर स्पेयर म्यान पहिले नै प्रकट भएको छ। थप pruning वसन्तमा पठाइन्छ, जब सबै पुरानो र क्षतिग्रस्त, कमजोर गोली हटाइयो, तिनीहरूलाई स्तर स्तरमा काट।
टोनियन्स ट्रिम गर्दा: लगातार प्रारम्भिक त्रुटिहरू
गोलीहरू धेरै छिटो हटाउन असम्भव छ। यस्तो गल्तीले संयोजन प्रत्यारोपणको कारण नयाँ स्थान वा झाडीको वार्षिक विभाजनमा हुन सक्छ। घाँस काट्नुहोस् धेरै चाँडो बढ्न थाल्छ, र फ्रस्टमा, खुट्टाले माइक्रोबुल भंग गर्न सक्छ। एकै ओर, जाडो फूलहरू दुर्लभता र सौन्दर्य हो, तर अर्कोतर्फ, यो बुझ्नै पर्छ कि यस्तो असामान्य उत्प्रेरक पछि एक झाडी मर्न सक्छ।
यदि तपाइँले सिफारिस गरिएको म्यादहरू पछि फसल पाउनुभयो भने, रिजोजहरू क्रश हुन सक्छ। ठण्डे क्षेत्रहरूमा, सेप्टेम्बरको अन्त्यमा उप-ग्राउण्ड गोली हटाउन सम्भव छ, तर बीचमा यो क्लासिकल हेरविचारको प्राथमिकतालाई अझ राम्रो छ र अक्टोबर-नोभेम्बरको गतिविधि स्थगित गर्न सकिन्छ। र एक अधिक उपेक्षा: यदि तपाईं असीमित रूपमा साथीहरूको कटौती गर्नुहुन्छ (सजावटको लागि कोठा वा बिक्रीका लागि) अर्को वर्षको संग्रहको लागि केहि नयाँ गुर्दे बनाइनेछ।
वसन्त स्वस्थ र बलियो सम्म कसरी क्यानो राख्न सकिन्छ?
फूल सानो थियो: किस्म र प्रजातिहरूको विवरण
कुखुरा के हो र यो किन उपयोगी छ?
वसन्तको मनपर्ने फूल Narcissus: बढ्दो र केयर
गुलाब रानी एलिजाबेथ: गार्डनको रानी
के यो एक शानदार नायक छ? शानदार विश्लेषण
Ulyana Dobrovský - युवा सौन्दर्य
सर्वश्रेष्ठ hookahs शहर - पट्टी "कोन" (चेल्याबिन्स्क)
स्वतन्त्रता रोग, थोरबबोटोटोनप्रोनिक पुष्परा
सुन्निएको लेबिया - रोग को साइन
कसरी "एन्ड्रोइड" स्वाप स्मृति गर्न? म के गर्नुपर्छ?